ဖင်လန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တရက်တာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး - Zet Star
ဖင်လန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တရက်တာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး
အသက် ၁၆ နှစ်ရှိ Miss Aava Murto ဟာ Finland နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နေရာမှာ တစ်ရက်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာအသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မိန်းမချောဝန်ကြီးချုပ် Sanna Marin က မနက်ပိုင်းမှာ ဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာပဲ ဝင်ပါခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်ရှိ Miss Aava Murto နဲ့ အသက် ၃၄ နှစ်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ် Sanna Marin တို့ဟာ ဝန်ကြီးချုပ်အလုပ်လုပ်ရင်း working breakfast အဖြစ် မနက်စာအတူစားဖို့ အစကစီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ညနေပိုင်းမှ ာတွေ့ဆုံဖို့ရှိလို့ နောက်ဆုံးမိနစ်မှကပ်ပြီး ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
Miss Aava Murto က ပါလီမန်အရှေ့မှာ မီဒီယာတွေကို မိန့်ကြားခဲ့ရာမှာ သူမအနေနဲ့ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို သင်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။ နေ့လည်ပိုင်းမှာ သူမဟာ ပါလီမန်အမတ်တွေရယ် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ တရားသူကြီးချုပ်နဲ့လည်း ပါလီမန်အဆောက်အအုံမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Miss Aava Murto ဟာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ Girls Takeover ကမ်ပိန်းအစီအစဉ်နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နေရာမှာ တစ်နေ့တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လူငယ်တွေကို နေရာပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို သဘောကျပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝန်ကြီးအချို့ရဲ့ မိန့်ခွန်းကိုနားထောင်ပြီးအတော် စိတ်ပျက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Innovative ဆိုတဲ့ စကားမျိုး အတွေးအခေါ်မျိုးကို လုံးဝမတွေ့ရပါ။အခုထိခေတ်ဟောင်းကအတွေးအခေါ်တွေမပျောက်ကြပါ။ ယူထားတာက အရေးပါတဲ့နေရာမှာ။
မြန်မာပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုပြောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တာ ဒီနှစ်ဆို ဆယ်နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ဒီဆယ်နှစ်အတွင်းမှာဘယ်လောက်ခရီးပေါက်ခဲ့သလဲ? ဒီဆယ်နှစ်မတိုင်ခင်ကဆိုပိုဆိုး။ ခေါင်းဆောင် ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း ဝန်ကြီးတွေမကောင်းရင်မရွေ့ပါ။
ခေတ်အဆက်ဆက်က ဝန်ကြီးတွေဟာ မစွံကြတာများပါတယ်။ အမှန်တရားဟာခါးပါတယ်။ ဆယ်နှစ်တောင်ရှိပြီလို့ တွေးမိချိန်မှာ တွေးစရာတွေ အများကြီးပေါ်လာပါတယ်။ နောက်ဆယ်နှစ်မှာ မြန်မာပြည် ဘယ်အနေအထား ရောက်နေမလဲလို့ ကျနော်တို့ အခု တွေးထားရပါမယ်။
ထက်မြက်ပြီး လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့ လူငယ်ဝန်ကြီးတွေကို နေရာပေးပြီး တိုင်းပြည်ကိုသွေးသစ်လောင်းသင့်ပါပြီ။ အခမ်းအနားတွေ အစည်းအဝေးတွေမှာ တိုတိုနဲ့ လိုအပ်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသားပြော။ မာန်နဲ့ထန်နဲ့အလုပ်လုပ်။ မိမိကဦးဆောင်ပြီး အလုပ်လုပ်ပြ။ ဒါမျိုးကိုမြင်ချင်ပါတယ်။
ကျနော်တွေ့နေရတဲ့ စကားများများပြောပြီး အခုထိ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က အတွေးအခေါ်တွေ မပျောက်သေးတဲ့ ဝန်ကြီးတွေကို စိတ်ပျက်လှပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျနော်အရမ်းလေးစားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် စေတနာအပြည့်ဆိုတာလည်း ရာနှုန်းပြည့်ကို ယုံကြည်ပါတယ်။
မင်းဘာမြင်ချင်လဲလို့မေးရင် နိုင်ငံတော်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို လူကြီးပိုင်းက ဦးဆောင်ကွပ်ကဲမှုပေးပြီး ဝန်ကြီးနဲ့ဒုဝန်ကြီးနေရာတွေမှာ ထက်မြက်ပြီးအရည်အချင်းရှိတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ သွက်သွက်လက်လက် တက်တက်ကြွကြွ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဝိုင်းလုပ်ကြတာကို မြင်ချင်လှပါတယ်။
မလုပ်မရှုပ်မပြုတ် ရသမျှလေး ကပ်တွယ်ပြီး နေသွားမယ်ဆိုတဲ့ သူမျိုးတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရွှေနဲ့စက်ဝယ်လို့ မရတဲ့အချိန်ကို ဖြုန်းနေသလိုပါပဲ။ ဘယ်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှမစောင့်ပဲ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်လုပ်မယ်။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားရင် ကိုယ်တာဝန်ယူပြီး တိုင်းပြည်အတွက် နုတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ထက်မြက်တဲ့လူမျိုးကို မြင်ချင်ပါတယ်။
စင်ကာပူအရမ်းမအောင်မြင်ခင်က စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဟာ တနေ့တော့ စင်ကာပူကနေ ထွက်ခွာသွားတဲ့ သင်္ဘောတစ်စီးကို မြင်လိုက်ရသတဲ့။ ဘာလို့ ဒီသင်္ဘောကထွက်သွားတာလဲ မနေ့တနေ့ကမှ စင်ကာပူကိုလာတာမလားဆိုတော့၊ ဟုတ်ပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စအဆင်မပြေလို့ ပြန်ထွက်ခွာသွားတာပါ။ သွားလိုက်ခေါ်။ အဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်။ သူတို့ဘာလိုချင်လဲ ငါတို့ကိုဘာပြန်ပေးနိုင်မလဲ ညှိမယ်။ အဲ့ဒီသင်္ဘောကို သွားပြန်ခေါ်ခဲ့ရာကနေ investments အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီလို ဘယ်သင်္ဘောဘယ်နေ့ကဝင်လာတာလဲကအစ အကုန်သိအောင်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဒီနေ့တွေ့နေရတဲ့ စင်ကာပူကို တည်ဆောက်ခဲ့တာ။
ကျနော်တို့ဆီမှာ ယောမင်းကြီးလို “လှံနဲ့ထိုးလိုက် သေသွားပါစေ။ နိုင်ငံအတွက် မှန်တာပြောဟုတ်တာလုပ်မယ်” ဆိုတဲ့ အလုပ်လည်းကြိုးစားတဲ့ ဝန်ကြီးမျိုးကိုလိုချင်ပါတယ်။ ဒီမှာရပ်တာကောင်းပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း The Ruler’s Guide ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ လီကွမ်ယူရဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်တာနည်းနည်းလျော့မှဖြစ်မယ်။ အော် … သူတို့ကသူတို့လေ …ကိုယ်တွေက ကိုယ်တွေပဲ။ တူမှမတူတာ။
“Where will we be at Year 2030?” If you know, please let me know!
ဒါနဲ့ Miss Aava Murto ဝတ်ထားတဲ့ တီရှပ်က “PLAN” ဆိုတဲ့စာလုံးက အသက်။
← မြန်မာပြည်က ထူးခြားဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့ ပင်စင်လစာ တချို့
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ အိမ်တွင်း နိမိတ်ဆိုး (၁၂) ချက် (တကယ် ခိုက်တတ်ပါတယ်) →